Shaqaalihii dhismaha Golaha deegaanka oo isaga baxay Buulo-Burde | Radio Wadani News
Home » WARARKA » Shaqaalihii dhismaha Golaha deegaanka oo isaga baxay Buulo-Burde
RadioWadani-Wararka Idaacadda Risaala ee Magaalada Muqdisho ay ka heleyso degmada Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in dhamaan degmadaasi isaga baxeen Shaqaalihii ku howlanaa dhismaha Golaha deegaanka.
Qaar kamid ah dadka degmada ayaa xaqiijiyey tallaabadaasi,iyaga oo sheegay in mudo laba maalin ah ay dadka deegaanka tababar la xiriira dhismaha Golaha deegaanka u qabteen.
In kastoo aan sirasmi ah loo cadeyn sababta keentay inay isaga baxaan Buulo-Burde ayaa waxaa jira khilaaf maalmahaan ka taagnaa dhismaha golaha deegaanka oo badi ay kasoo horjeesteen waxgaradka & Xildhibaano ka tirsan Hir-Shabeelle.
Waxaa kaloo xusid mudan in weli degmada Buulo-Burde ay ka jirto xiisadii ka dhalatay xil ka qaadis lagu sameeyey Guddoomiyaha degmadaas iyo duqa Magaalada,kuwaas oo aan weli xilka wareejin, iyaga oo shuruud ku xiray.
Odayaal iyo waxgarad kasoo jeeda Buulo-Burte oo dhowr jeer Warbaahinta la hadlay waxaa ay kasoo horjeesteen dhismaha golaha degaanka, iyaga oo u sababeeyey in amnidarro ay ka jirto degaanada Hir-Shabeelle,isla markaana aysan xiligaan ku habooneyn in laga dhiso gole deegaan.
Wasiirka arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Maamulka Hir-Shabeelle Maxamed Cali Caadle oo dhankiisa Warbaahinta la hadlay ayaa wacad ku maray inay gole deegaan u sameyn doonaan Buulo-Burde.
Previous: Xasan Shiikh iyo wafdi uu horkacayo oo muqdisho kuso laabtay
Next: Wararkii ugu danbeyey qarax ka dhacay Gaalkacyo